ကားအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်သူ - 1D;ONE
သင်အဘို့အညာဘက်အရပျ၌ပါပဲ ကားအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်သူ.ယခုအချိန်တွင်သင်ရှာဖွေထားပြီးမည်သည့်အရာကိုမဆိုသင်တွေ့ရှိရန်သေချာသည် 1D;ONE.ကျနော်တို့ကဒီမှာပေါ်မှာကြောင်းအာမခံပါသည် 1D;ONE.
အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးနိယာရသောလက်စွပ် 3L 1D အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ CO ။ အလုပ်ရုံ
1d; ပစ္စတင် 3L 1D Auto Parts CO ။ စက်ရုံ, ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း 32 ခု, နေ့စဉ်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် 40,000 PCS Piston, PCS PASS ပစ္စတင်လက်စွပ်ကောင်းသော elasticity, မာကျောခြင်း, ခံနိုင်ရည်နှင့်အပူခုခံ1D အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ CO ။ , LTD ။ Pirton Ring 3L 1D Auto Parts CO ။
အရည်အသွေးမြင့်ဆလင်ဒါလက်များလက်ကားလက်ကားလက်ကား - 1D Auto Parts Co ။ , Ltd ။
1d; ကောင်းသောစျေးနှုန်းနှင့်အတူလက်ကားပိုက်ကွန်ဆလင်ဒါဆလင်ဒါလက်များ - 1d; တ ဦး တည်း, ခိုင်မာတဲ့သုတေသန& နည်းပညာကိုဖွံ့ဖြိုးစေခြင်း - အင်ဂျင် 1600 ကျော်ကိုပြင်ဆင်ပါ1D; အရည်အသွေးမြင့်ဆလင်ဒါလက်များလက်ကားလက်ကားလက်ကား - 1D Auto Parts Co ။ , Ltd ။ အားကောင်းတဲ့သုတေသန& နည်းပညာကိုဖွံ့ဖြိုးစေခြင်း - အင်ဂျင် 1600 ကျော်ကိုပြင်ဆင်ပါဆလင်ဒါနံရံသည်ဆလင်ဒါဆလင်ဒါတွင်း၌နေရာ ချ. ဆလင်ဒါတွင်းရှိအပေါက်များဖြင့်ထားရှိပြီးဆလင်ဒါခေါင်းပေါ်ဖြင့်သတ်မှတ်သည်။ ပစ္စတင်သည်၎င်း၏အတွင်းပိုင်းအပေါက်တွင်အပြန်အလှန်ရွေ့လျားမှုကိုပြန်လည်ပြုလုပ်ပေးသည်။ ဆလင်ဒါလက်မောင်း၏ function မှာ:1. ဆလင်ဒါအလုပ်ခွင်နေရာကိုဆလင်ဒါခေါင်းနှင့်ပစ္စတင်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။2. ဆလင်ဒါပစ္စတင်ဒီဇယ်အင်ဂျင်၏ဆလင်ဒါလက်ရှိမှုသည်ပစ္စတင်ဘက်တွင်ပစ္စတင်ဘက်သို့0င်ရောက်လာပြီးပစ္စတင်၏အပြန်အလှန်လှုပ်ရှားမှု ဦး ဆောင်မှုဖြစ်လာသည်။3. သင့်လျော်သောအပူချိန်တွင်အလုပ်လုပ်ရန်ပစ္စတင်ပစ္စမကိုပစ္စမှတ်များ၏အပူကိုလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်သင့်လျော်သောအပူချိန်တွင်အလုပ်လုပ်ရန်ရေအေးသို့လွှဲပြောင်းပါ။4. လေဖြတ်သည့်ဒီဇယ်အင်ဂျင်နှစ်ခုကိုလေကြောင်းလိုင်းများဖြန့်ဖြူးခြင်းအားဖြင့်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်းကိုပစ္စတင်ကဖွင့်လှစ်ထားသည်။1D အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ CO ။ , LTD ။ Panty Liners 1D Auto Parts CO ။ , LTD ကိုအသုံးပြုသည်။
Professional Professional Engine Oil ထုတ်လုပ်သူထုတ်လုပ်သူများ
1D; ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အင်ဂျင်အင်ဂျင်နီယာထုတ်လုပ်သူထုတ်လုပ်သူများထုတ်လုပ်သူထုတ်လုပ်သူများ, ကုန်ပစ္စည်းထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအဆင်ပြေ& လုံလောက်သောအဆင်သင့်စတော့ရှယ်ယာအင်ဂျင်ဆီ1D အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ CO ။ , LTD ။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အင်ဂျင်ရေနံထုတ်လုပ်သူများဂီယာအုံသည် Gearbox ဖြစ်ပြီးဂီယာပုံးရေနံသည်ဂီယာပုံးရေနံဖြစ်သည်။ Gearbox Oil သည်စုပေါင်းအသုံးအနှုန်းဖြစ်သည်။ Gearboxes များကိုလက်မရမီ gearboxes နှင့်အလိုအလျောက်ဂီယာအုံများကိုခွဲထားသည်။ Gearox ဆီအများအားဖြင့်အလိုအလျောက်ဂီယာအုံများတွင်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ဂီယာစနစ်ကိုသန့်ရှင်းစေရန်အသုံးပြုသောရေနံထုတ်ကုန်ဖြစ်ပြီးဂီယာထုတ်လွှင့်မှု၏သက်တမ်းကိုချောဆီနှင့်ချဲ့ထွင်ရန်အခန်းကဏ္ play မှပါ0င်နိုင်သည်။
1D ကားပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်း CO ။ , LTD မှဆောင်သောပင်မဖို့အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးမိတ်ဆက်ခြင်း။ အလုပ်ရုံ
1D; ။ ONE အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးမိတ်ဆက်ခြင်းကိုပင်မမှ 1D ကားပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်း CO ထမျး, LTD ။ စက်ရုံ, ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း 32 ခု, နေ့စဉ်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် 40,000 PCS Piston, PCS PASS ပစ္စတင်လက်စွပ်ပင်မ bearing1D အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ CO ။ , LTD ။ 1D ကားပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်း CO ။ , LTD မှဆောင်သောပင်မမှမိတ်ဆက်ခြင်း။
စျေးနှုန်းကောင်းနှင့်အတူလက်ကားပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပစ္စတင်လက်စွပ်ထုတ်လုပ်သူ - 1D; တစ်ခု
1D; စျေးနှုန်းကောင်းနှင့်အတူလက်ကားပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပစ္စတင်လက်စွပ်ထုတ်လုပ်သူများ - 1D; တစ်ခု, စျေးကွက် orientated& ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု - တိုက်ရိုက်ဆိုင်နှင့်ကုန်သွယ်ရေးရုံးဖွင့်ပါ,1. Toyota, Honda, Suzuki, Dafa နှင့် Nissan Gasoline အင်ဂျင်များသည် Outer Circle Plew လက်စွပ်, ဒုတိယမြောက်သတ္တုစပ်, NPR ပုံသဏ္ olo ာန်, အရောင်ကုဒ် (အနီရောင်, အဝါရောင်နှင့်အပြာ) နှင့် t ကိုရိုက်ထည့်ပြီး t ကိုသို့မဟုတ် n ကိုရိုက်ထည့်ပါ, လက်စွပ်တစ်ခုစီကိုအရောင်ကုဒ် (အနီရောင်, အဝါရောင်နှင့်အပြာ) နှင့်ပက်ဖြန်းထားသည်။2 ။ လက်စွပ်မှုန်ရေမွှားအရောင် code (အနီရောင်, အဝါရောင်နှင့်အပြာ)3. Isuzu Diesel Engine သည်မူလလုပ်ငန်းစဉ်, ဘေးထွက် plating (3) ခုသို့မဟုတ်လေးဘက်မှာသုံးခုပြားချပ်ချပ်ပြားလေးပြား, ရေနံလက်စွပ်နှင့်ကြီးမားသောအပေါက်များနှင့် polytetrafluoroethylene လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအသုံးပြုသည်။ T ကိုရိုက်ထည့်ပါသို့မဟုတ် N ကိုလက်စွပ်မှုန်ရေမွှားအရောင်ကုဒ် (အနီရောင်, အဝါရောင်နှင့်အပြာ)